Basa - chete nzira ruzivo. Kana kodzero akanga Bernard Shaw?
"Basa - chete nzira ruzivo" - Mashoko aya ari Irish munyori wemitambo George Bernard Shaw anozivikanwa nevakawanda. Statement iri hunhu kwouzivi uye akasundira pfungwa dzake. Pasina panyaya zvakanyorwa dzakawanda essays uye musingaitirani nharo. Saka sei zvakanakisisa kududzira mashoko aya?
The okuti "The Basa - chete nzira ruzivo" rinoreva zvakadai dzinokosha sezvakanga chikuru chinodiwa kuti munhu ruzivo. Pashure pezvose, chido chokudzidza chinhu chitsva, tinomutenda zvose kuti isu nhasi. Chii chakanga Pasi zviuru zvemakore akapfuura, kare munguva yedu? Zvinenge chinhu. On nyika inogarwa Neanderthals, uye chete chido vararame, Nokumukira kutsvaka chinhu chitsva, kuti pakati pavo varume.
Knowledge - ndiyo nzira youpenyu. Munhu anoda kufunga, kudzidza, kushanda, uye Chikurukuru - vanowanzofunga inowana zvizhinji. Izvi chinosiyanisa kubva vasingazivi, avo vanorarama neunyengedzi, uye chete kubva zvipenyu tsvina. Kuti vabudirire imwe chinangwa, kuita chero zano, zvinokosha kuedza basa, basa, uye vaviri urongwa hwake, uye pamusoro pachavo. Tinofanira kuita, mune mamwe mazwi, kufambira mberi.
Mashoko okuti "zvinhu - chete nzira ruzivo", iro zvikuru matambudziko rakafara, anoita munhu chishamiso. Vamwe vanhu vanenge vasingadi chinhu upenyu, chete kuseka mashoko. Vane tsika yakasiyana zvachose, kutaura zvazviri, kazhinji vasiri aripo. Zvisinei, izvi ndizvo chete kwenguva uye kwenguva. Kukurumidza - ndizvo inonyatsobudirira nzira kuti munhu kuwana bhora tikaisa. Kana anofanira kuita chimwe chinhu, kuwana, kuwana, ziva, iye uchatanga kuita. Kunyange vasingakendengi, simbe uye regai anomiririra munhu atange kuedza kubudirira pazvinangwa zvavo. Ndiyo Mashoko okuti "mabasa -. Chete nzira nokuziva"
Iwe kurarama - uye kudzidza
Mwari anoziva makore vangani chirevo ichi. Asi munhu anogona kutaura nechivimbo - zviri zvamazvirokwazvo chokwadi. Agere panzvimbo imwe, ingori musoro kudzidza chinhu. Vanhu nguva dzose vakadzidzira muitiro basa. Uye, nenzira, hazvina kururama nguva dzose. All vanokanganisa uye kudzidza kubva kwavari - zviri zvamazvirokwazvo zvakajairika. Kana ukasiya kuita, funga, akafunga synthesize nekuita muupenyu, vanhu pakarepo vanotanga zvinoshatisa. Zvinokosha rimwe zuva asingadi kuita, nhema pamubhedha TV, neMuvhuro unonzwa sokuti poglupevshim zvachose kwete vakagadzirira zvibereko mabasa. Munhu anofanira kushanda. Kuti mabasa ayo aiva imwe pfungwa, zvirokwazvo izvo nezvinangwa. Motivation - chinhu fanira zvinoriumba. Asi munhu wose yavo.
Kana kodzero aiva munyori wemitambo?
Bernard Shaw aiziva zvaaitaura. "Basa - chete nzira ruzivo" - zviri pachena kuti mashoko nendarama, vazhinji kunogona nokukurudzirwa, pfungwa chinofamba, usakanda mapfumo, kuti vabudirire pazvinangwa zvavo. Kudzidza itsva, vachanzwisisa vazhinji mitemo chinangwa chokuvapo edu nyika. Nekuti pasina hazvibviri kuita rinoshanda basa. Uye vose, kuzvicheka-kukura - nguva dzose zvakanaka. Man ichava nani uye kuti nyika zvishoma akakwana.
Zvikuru gakava uye gakava zvakakonzera uye achiita kuti mashoko "The mabasa -. Chete nzira nokuziva" Yaitaurwa "nokuti" uye "pamusoro" kugara inopa vazivi siyana ano nevafungi. Kunyange zvazvo rutsigiro mutsara uyu awana zvizhinji. Kuzorwa chiito nani dubious nharo: kuti, mukuwedzera yokuita, unogona kuona, kunzwa, vanonzwa - ichi ndiko nzira ruzivo. Zvisinei, achiona chete, kunzwa uye kunzwa, unogona kudzidza chinhu, asi haana kuramba rwavo pakukwana. All mashoko akapiwa nzira dzakafanana, unofanira kuramba kushandisa tsika, kuswedera chaizvo vafunga, iva nechokwadi nezvavanoona / kunzwa kana kuramba categorically, kuti vataurewo zvavanofunga. Chete synthesizing nzira yose ruzivo, uchatanga zvakarurama uye hwakasiyana-siyana mafungiro. Uye iri nguva yedu inokosha chaizvo.
Empirical pamwero ruzivo mune zvesayenzi
David Bohm: Biography, mapikicha uye zvinonakidza zvinhu
Unyanzvi uye nesayenzi. Art uye sayenzi
Nyaya nesayenzi munyika ezvinhu kufanana ruzivo
Masayendisiti akawana ari Moon guru mari mvura
Pachipatara pacho "Moldova", Truskavets: tsananguro, mapikicha uye wongororo
Nyora kutaura tsamba hakusi kuoma
Achitsva uswa, chinonhuhwira kuravira, - rinoponesa mukurapa zvirwere zvakawanda
19 rakapfuma vanhu vari UK, vazhinji vacho vasina matatu
Sei weld nenyere kuti mutopota? Mhando pombi, nomoto midziyo
Domestic Politika Nikolaya 1
Gabriela Duarte - mutambi wokuBrazil, continuer kwetsika mhuri
Guzubheri Ural neemaradhi: pakudyara, hanya, rondedzero siyana uye wongororo
Interesting bhuku hope. Shumba kurota mhanza kana dambudziko?
Mhando kuita zviri pamutemo